Cali Khaliif Galeyr oo goor dhow gaaray magaalada Hargeysa, dayuuradna ka raacay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Cali Khaliif Galeyr oo goor dhow gaaray magaalada Hargeysa, dayuuradna ka raacay!!
Cali Khaliif Galeyr oo goor dhow gaaray magaalada Hargeysa, dayuuradna ka raacay!!
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Gallayr oo shalay malleeshiyo beeleed iska hortaageen inuu ka dhoofo garoonka dayuuradaha Buuhoodle ayaa goor dhow gaaray magalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland.
Cali Khaliif ayaa la sheegay inuu xalay socdaal qarsoodi ah kaga ambabaxay magaalada Buuhoodle, isagoo sii maray dhinaca dhulka, waxaana saaka aroortii uu gaaray magaalada Burco ee gobolka Togdheer, halkaasoo si diran loogu soo dhoweeyey.
Wararka ayaa sheegaya in Cali Khaliif iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ay goor dhow gaareen magaalada Hargeysa, halkasoo wax yar ka dib ay dayuurad ka raaceen iyagoo ku sii jeeda magaalada Jabuuti.
Waxay halkaas kaga qeyb galayaan wadahadalo siyaasadeed oo u dhexeeya maamulkiisa iyo kan Somaliland kuwaaso ka dhacaya magaakada Jabuuti.
Cali Khalif Galeyr oo ayaa bedelay mowqifkisii siyaasadeed ee uu kaga soo horjeeday maamulka Somaliland ka dib markii dowlada Soomaaliya ay ka gaabsatay iney aqoonsi buuxa siiso maamukiisa Khaatumo, isagoo hadda gorgortan kula jira Somaliland.
Cali Khaliif oo deg degay kadib markay ku xumeeyeen Maamluka Xasan Sheeq oo ka shaqeeyaan sii kala qaybinta Ummada Soomaaliyeed.
Previous PostToos u Daawo: Dooda Musharixiinta oo Bilaabatay, Waxyaabaha ay ka hadleen!! Next PostSidee loo tigsadaa nolol dhab ah_ Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!